२०२० सालको राष्‍ट्रिय जनगणना
जवाफ दिने साइट（अंग्रेजी）
जापान सरकारले यही मिति २०२० अक्टोबर १ तारिख देखि राष्‍ट्रिय जनगणना सुरु गर्दैछ।
राष्‍ट्रिय जनगणना भनेको सबै भन्दा महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सर्वेक्षण हो, र हरेक पाँच बर्षमा एक पटक गरिन्छ।
राष्‍ट्रिय जनगणनाको नतिजालाई, विदेशी महानुभावले सजिलोसँग जीवन गुजारा गर्न मिल्ने सहर निर्माणका योजना तर्जुमामा प्रयोग गरिने छ।
राष्‍ट्रिय जनगणनाको दायरामा पर्नका लागि राष्ट्रियताले केही फरक पर्दैन। जापानमा ३ महिना वा सो भन्दा बढी समय बसोबास गरेको व्यक्ति अथवा ३ महिना वा सो भन्दा बढी समय बसोबास गर्ने व्यक्ति भए राष्‍ट्रिय जनगणनामा सामेल हुनुपर्छ। दायरा भित्र पर्ने व्यक्तिमा उत्तर दिनुपर्ने दायित्व रहने हुनाले उत्तर दिनै पर्ने हुन्छ, त्यसैले कृपया जवाफ दिनुहोस्।
उत्तरका अन्तर्वस्तुलाई तथ्याङ्क तयार पार्न मात्र प्रयोग गरिने छ। अध्यागमन वा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान जस्ता अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गरिने छैन।
राष्‍ट्रिय जनगणना तल उल्लेख गरिएको तरिका अनुसार गरिनेछ।
*राष्‍ट्रिय जनगणनाको तालिका केहि ठाउँमा परिवर्तन हुन सक्छ।
राष्‍ट्रिय जनगणनाको लागि कागजातको वितरण (सोमबार, सेप्टे. १४ देखि)
एक जना गणक तपाईंको घरमा आएर राष्‍ट्रिय जनगणनाको लागि कागजात तपाईंको मेलबक्स भित्र राखेर वितरण गर्नेछ।
अनलाइन जवाफ अवधि (सोमबार, सेप्ट. १४ देखि बुधबार, अक्टो. ७ सम्म)
राष्‍ट्रिय जनगणनामा इन्टरनेट मार्फत उत्तर दिन सकिनेछ।
राष्‍ट्रिय जनगणनाको लागि कागजात तपाईंको घरमा पुगे पछि, जवाफ दिने साइटमा पहुँच गर्नुहोस्, र स्क्रिनमा देखाइने निर्देशनहरू अनुसार राष्‍ट्रिय जनगणनाको जवाफ दिनुहोस्। कृपया इन्टरनेट चलाएर जवाफ दिनुहोस्।
जवाफ दिनलाई, तपाईंलाई “लगइन आईडी” र “एक्सेस कि” चाहिने छ, जुन तपाईंलाई वितरण गरिएको “सर्वेक्षण कागजात खाम”-मा पाइने “अनलाइन जवाफ दिने गाइड”-मा लेखिएको हुन्छ।
सर्वेक्षण कागजात खाम
अनलाइन जवाफ दिने गाइड
अनलाइन जवाफ तल उल्लेख गरिएका भाषाहरूमा उपलब्ध छ. तपाईंलाई चाहिएको भाषामा क्लिक् गर्नुहोस्।
जापानी, अङ्ग्रेजी, चिनियाँ ( सरल अक्षर एवं परम्परागत अक्षर), दक्षिण कोरियाली, भियतनामी, स्पेनिस, पुर्तगाली
तपाईंको जवाफ सुरक्षित हुनेछन्, किनकि कडा सुरक्षाको साथ राखिनेछन्।/li>
जवाफ दिने तरिकामध्ये यो सबै भन्दा पर्यावरणीय कुशल हुन्छ, कागजको कागजातको वितरणले गर्दा CO2 र प्रशासनिक लागत कम गर्छ।
जवाफ दिनको लागि कृपया तपाईको स्मार्टफोन वा पीसी प्रयोग गर्नुहोस्।
*यदि जवाफ दिइसके पछि, बिहिबार, अक्टोबर १ तारिख भन्दा अगाडी तपाईंको घरवारमा केहि परिवर्तन हुन्छ, जस्तै जन्म वा पुनर्वास आदि, कृपया फेरि लगइन गर्नुहोस् र जवाफलाई सुधार गर्नुहोस्। फेरि लगइन गर्नलाई, तपाईंले राख्नुभएको “लगइन आईडी” र “पासवर्ड” चाहिनेछ।
*घरवारहरू जसले अनलाइन जवाफ दिएका छन्, तिनीहरू कागजको सर्वेक्षण बुझाउने आवश्यक छैन। तपाईंको कागजको सर्वेक्षण नभर्नुहोस् र त्यसलाई प्रयोग नगरिकन खारेज गर्नुहोस्।
कागजमा जवाफ दिने अवधि (बिहिबार, अक्ट. १ देखि बुधबार, अक्टो. ७)
यदि तपाईंले अनलाइन द्वारा जवाफ दिन सक्नुहुन्न भने, कागजको सर्वेक्षण द्वारा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं कागजको सर्वेक्षण प्रयोग गरेर जवाफ दिनुहुन्छ भने, कृपया “सर्वेक्षण पत्रको अनुवाद” र “सर्वेक्षण पत्रमा जवाफ लेख्ने तरिकाको अनुवाद” सन्दर्भित गर्नुहोस्, जुन “सर्वेक्षण कागजात खाम”-मा पाइन्छ।
कृपया “राष्‍ट्रिय जनगणना सर्वेक्षण कागजात खाम”-मा भएका राष्‍ट्रिय जनगणना सर्वेक्षण कागजातहरूलाई भर्नुहोस्।
भरिसकेको सर्वेक्षण फारमलाई तीनमा मोड्नुहोस् र “पोस्टल खाम”-मा राख्नुहोस्, अनि बुधबार, अक्टोबर ७ तारिख भन्दा अगाडी यसलाई नजिकको पोस्ट बाकसमा राख्नुहोस्। हुलाक टिकट आवश्यक पर्दैन।
राष्‍ट्रिय जनगणना सर्वेक्षण कागजात
* केहि ठाउँमा पोस्ट द्वारा पठाउने उपाय उपलब्ध नहोला।
* यदि पोस्ट द्वारा पठाउन गाह्रो छ भने, कृपया राष्ट्रिय जनगणना कल सेन्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र एक जना गणक आएर तपाईंको राष्ट्रिय जनगणना सर्वेक्षण सङ्कलन गर्न माग्नुहोस्।
सर्वेक्षण पत्रको अनुवाद
सर्वेक्षण पत्रमा जवाफ लेख्ने तरिकाको अनुवाद
सबमिशनको लागि अनुरोध
यदि तपाईंको जवाफ बुधबार, अक्टोबर ७ तारिख सम्म पुष्टि गरिएको छैन भने, एक जना गणकले तपाईंलाई जवाफको लागि माग्नेछ।
Copyright©️ 1996-2020 Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications All rights reserved.